Musi waChikumi 19-21, 2019, Hangzhou Forsetra Roof Tile Co, Ltd yakatora chikamu muInternational Trade Week kuGhana. Zvigadzirwa zvedu zvakagamuchirwa zvakanaka pachiratidziro uye zvakataurwa nevatori venhau. Henry, maneja wedu weDhipatimendi reOrsea, semumiriri wemakambani ekuratidzira, akagovana zvakadzama nezve matombo edu akafukidzwa padenga materu kubva pane zvakakosha zvigadzirwa kusvika kune yakapedza-yepamusoro chigadzirwa chemhando yepamusoro, zvakare yakaratidza zvimwe zvirongwa zvakanaka zvatakaita.
Ghana, semusika mutsva kumadokero kwe Africa, vatengi nevatengi vaive nemhando shoma yekusarudzira matenga edenga. Dombo redu rakaputirwa matenga edenga airatidzira patsva mumaziso evashanyi vese, kunyanya kune avo ekuvakisa zvigadzirwa ekuvaka nevanopinda mapurojekiti. Nhamba huru yevashanyi yakaratidza kufarira chigadzirwa chedu.
Isu takavaraidza mazana evashanyi mudzimba medu, akanyatsotsanangudza marudzi ese emibvunzo nezvematenga edu emagetsi uye PVC mvura gutter kuvabatsira kuti vazive isu uye kuti vazive chigadzirwa chedu zvirinani. Vatengi vazhinji nevashandisi vekupedzisira vakachinjanisa makadhi ebhizinesi nesu kana kuunganidza masampula, machati emavara nemabhurocha kubva kwatiri, zvakatonyanya, vamwe vakaisa imwe mari kuti vaise maodha panzvimbo. Iyi kuratidzira yakawana budiriro yakakwana uye kudzoka kwakanaka kwazvo. Isu tinotenda kuti tichaunza zvivakwa zvitsva uye zvakanaka zvinotaridzika kunharaunda dzeGhana.
Nguva yekutumira: Kubvumbi-08- 2020